Raha tsy misy ny orana dia tsy misy na inona na inona mitombo. - Anony - Quote Pedia
Hoy io Ny tsy fahombiazana dia ampahany lehibe amin'ny fiainantsika satria izy ireo ihany no mamolavola antsika ho tsara kokoa. Indraindray isika tokony hahatakatra ny zava-misy fa ny rivodoza dia tsy tonga manapotika ny fiainantsika ihany fa manadio ny lalantsika ihany koa.
Tsy fiainana afovan'ny raozy intsony ny fiainana ary mitaingina roller coaster foana. Manana ny laharam-pahamehany sy ny dikany ny fiainana. Tsy tokony ho very fanantenana sy hatoky an'Andriamanitra foana isika. Tokony ho tsaroantsika fa Andriamanitra dia manomana antsika hiaina tsara lavitra sy misy dikany fotsiny amin'ny fanomezana lesona lesona iainana.
Ny tsy fahombiazana dia vato fiakaran'ny fahombiazana satria tsy amin'ny alàlan'ny fanaovana hadisoana fotsiny ihany isika. Tokony hanao fahadisoana isika satria izy ireo ihany no manampy antsika hamakafaka ny antony sy ny toerana tiantsika hatao ratsy.
Ilay mpandinika malaza sy mpahay fizika mamirapiratra, Albert Einstein, indray mandeha, dia nilaza fa izay mbola tsy nanao fahadisoana dia mbola tsy nanandrana zava-baovao. Raha ny marina, ny ankamaroan'ny tsy fahombiazan'ny fiainana dia ireo izay nilavo lefona tamin'ny farany fa tsy ahalala hoe hatraiza ny fahitany ny fahombiazana.
Tsy tokony ho diso fanantenana loatra amin'ny fiainana isika rehefa mahita ny tsy fahombiazantsika. Izany dia satria ny hany zavatra maharitra eto amin'ity tontolo ity dia ny fiovana, ary ity dingana ratsy ity koa dia hanjavona amin'ny fotoana. Tokony ho tsaroantsika fa rehefa miharatsy ny toe-javatra, dia ny fihisihana ihany no mandeha. Midika izany fa mifidy ny hoavintsika manokana.
Ny ezaka mafy sy ny tolona ataontsika dia tena fanoratana hafatra amin'ny fahombiazantsika. Ilaina ny manome fotoana ho antsika ary hanana faharetana hiandry ny valiny. Na inona na inona zava-mitranga eo amin'ny fiainana, dia tsy tokony hiala amin'ny fanantenana mihitsy isika.
Tsy manao zavatra samihafa ny mpandresy; fa hafa ny ataon'izy ireo. Ny fiainana dia ny zava-drehetra momba ny fahatakarana sy ny fandikana ny hadisoana ataontsika ary ny fampiasana ny fotoana sy ny fomba tsara indrindra anaovana azy mba hanaovana hetsika maranitra kokoa, izay hanao dingana iray akaiky kokoa ny fahombiazana.
Mitombo ny Quotes
Teny mitombo ary fivoarana
Fanentanana momba ny fiainana
Quotes on the Rain
Fototry ny asabotsy
Quotes Growth Quote
Mila anao ny hoavinao. Ny fiainanao taloha dia tsy. - Anonyme
Mila anao ny hoavinao. Ny fiainanao taloha dia tsy. - Teny nindramina tsy fantatra anarana:
Aza kivy. Matetika izy no farany farany amin'ny bunch izay manokatra ny hidin-trano. - Anonyme
Angamba miasa mafy nandritra ny fotoana ela ianao mba hahatratraranao ny tanjonao. Saingy, noho ny sasany…
Ny fifandraisana dia tsy maty ho faty ara-boajanahary fotsiny. Maty izy ireo noho ny fihetsika, ny fitondran-tena, ny Ego, ny tombony ary miafina tsy fantatra. - Anonyme
Ny fifandraisana mahafinaritra dia tokony hanan-danja hatrany ary tokony hiorina voalohany amin'ny andry fahatokisana…
Tsara kokoa ny mihetsika raha tsy misy fihetsiketsahana. - Anonyme
Tsara kokoa ny mihetsika raha tsy misy fihetsiketsahana. - Teny nindramina tsy fantatra anarana:
Aza mihemotra na avelao hitranga aminao izany. Mivoaha ary tongava amin'ny zavatra. - Anonyme
Imbetsaka isika no manadino zavatra. Zavatra tsy tokony hitranga na oviana na oviana izany. Ianao dia tokony…